Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaasanitti guyyaa wiyxataa Woodbury County keessati namni 3 dab | KWIT
Oromo News 01.04.21
Manni fayyaa Siouxland akka himetti gabaasa December 27th torbaan dhumaa irrati ergabaasanitti namni qabame akka olgudattee jiru himan. Gabaasni akka jedhetu Kanaan dura namni xiqqaachu kan male sababa namni haguugi fuula godhachuufi fageenya ufii egachun ta’uu nimala jedhame. Haata’u male, guyyaa ayyaana namni seera kana kan hin hordafin ta’uu nimala.
(South Dakota tti torbaan tokko keessati namni 2,000 ol kan qabame yoo ta’u, namni waliigalatti duemmoo 67 dha.
Nebraska keessati, torbaan tokko keessati namni 7,000 ol qabame jira, akkasumas waliigalatti namni 113 kan du’eedha. Ogeessi fayyaa Dakota County akka barri haarawa seene as namni lama du’uu gabaasan. Guyyaa har’aa ammo namni 23 haarawa qabame jira.)
Abukatoon Iowa akeekachiise kenne qorannoo umatta kakkaasu waan qorachuu jalqabaniif waa kijibuu irraa akka uuf eegan himan.
Federal Trade commission akka jedheti motumaan bilbiluu, dhamsaa, email yookin social media irrati contact godhan social security, account bank yookin credit card numbers gaafachuudhaf.
Dabalataan, birrii keesan parties sadaffaa irraa kan argatan ta’a.
Birrii keesan direct deposite, check warqataan fi economic impact payment debit card kan argattan.